New TV "TV" gosipụtara na mmemme taa #helloagain | Esi m mac
New App «TV» nke emere na mmemme taa #helloagain
Apple kwuputara na mmemme nke taa, akpọrọ # ndewookwa, ngwa ohuru a na-akpọ TV, tinyere ọhụrụ ọhụrụ MacBook Pro, nke pụtara ìhè maka ọrụ ọhụụ gụnyere ugbu a Touch Bar. Ngwa ahụ chọrọ ịghọ ahụmịhe TV jikọtara ọnụ, dị ka ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ Apple niile, ọ bụghị naanị na Apple TV, kamakwa na iPad na iPhone.
Ihe omume a mere na mbụ ihe karịrị mmadụ 300 na isi ụlọ ọrụ Apple na Cupertino. Dabere na Tim Cook, CEO nke Apple bụ onye mere ka "isi okwu" bụrụ onye isi, ọganihu ọhụrụ a "Ọ ga-agbanwe ụzọ anyị si ekiri TV."
Akwụkwọ edemede a E gosiputara ya na MacBook Pro ohuru, 13 ″ na 15 ″, na isi ihe ohuru nke Touch Bar n’elu kiiboodu, nke a na-edozi kpamkpam dabere na mmemme anyi ji na Mac.
Ngwa nwere udi taabụ niile ya na ihuenyo. N'ime ya, anyị nwere ike ịhọrọ ihe nkiri, usoro, ma ọ bụ ihe omume anyị chọrọ ịhụ, yana ịhazi usoro dị iche iche iji hụ ọzọ. N'ezie, ị ga-enwerịrị ndenye aha maka ọdịnaya ndị ahụ na anyị chọrọ iji anya nke uche hụ ma etinyeghị ya na isi ihe ngosipụta nke Apple na-enye.
Na mgbakwunye, anyị nwere ike jiri Siri site na ngwa a iji mee ka anyị hụ ihe anyị chọrọ. Ọ nwere ọtụtụ ikike. Ingchọ site na Siri nwere ike ịba uru n'ezie iji hụ ọdịnaya kachasị amasị anyị.
Ihe na-adịghị mma bụ na maka oge ọ ga-adị na United States, yabụ site n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa anyị ga-echere ka ha mepee ihe dị iche iche nke ngwa ọhụrụ a.
Ngwa ahụ ga-abịa dị ka a free software melite maka ngwaọrụ niile dakọtara tupu njedebe nke afọ. Na vidiyo vidiyo, ngwa ahụ dị oke mma na ngwaọrụ iOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » New App «TV» nke emere na mmemme taa #helloagain
Apple kwụsịrị 11-anụ ọhịa MacBook Airs na okenye MacBook Pros na-enweghị Retina ngosi
Vidio Keynote nke gọọmentị dị ugbu a na ọwa YouTube nke Apple